Farsamada | December 2019
Ugu Weyn Ee Farsamada
Waa maxay majarafad leh qashin, iyo sida loo sameeyo naftaada
Xitaa marka la yimaado jiilaalka, ka shaqeeya dayrka iyo beerta ma joojineyso. Ka saarida koofiyadu waa nidaam waqti gaaban ah, oo u baahan kharashka muuqda ee qofka. Laakiin waxa ku saabsan kuwa, sababtoo ah da 'ama jirro, ma awoodi karaan inay dhaqdhaqaaq isdifaacaan? Qaar badan oo ka mid ah kuwa bannaanka u xannaaneeya oo daryeela caafimaadkooda oo dooni waayeen waqti badan iyo dadaal ah inay sameeyaan shaqo culus oo xoog leh isticmaalaya baraf bararan.
Qalajiyaha Universidada ah Ezidri Snackmaker FD500
Qalabka casriga ee casriga ah waa hab weyn oo lagu badbaadiyo wakhti iyo alaab caafimaad oo loogu talagalay qoyska oo idil. Qalabka loo yaqaan "Ezidri Snackmaker FD500" waa qalab aad u qurux badan oo aad ku qurxoontahay. Tani waa jaqsiinta ugu fiican ee dhammaan xirfadaha, oo lagu habeeyey kala-doorasho kala duwan.
Qalajiyaha Universidada ah Ezidri Ultra FD1000
Waxaa jira erayo cajiib ah - "Diyaargaroobidda xagaaga xagaaga ...", taas oo macnaheedu yahay in aad u baahan tahay inaad isku diyaariso jiilaalka ka hor. Tani waxay sidoo kale khuseysaa soo iibsiga alaabta. Fitamiin la'aanta ma dareemayso jirka oo keliya qofka xilliga jiilaalka uu cuni doono khudradda, miraha iyo geedo yaryar oo ay la socdaan content ugu sareeya.
Sida loo sameeyo qashin dhagax ah oo baradho ah oo baaskiil hore ah
Qof kasta oo waayo-aragnimo ku leh beerashada baradho waa yaqaanaan tiknoolajiyada gacanta ee duurka hills. Si loo fududeeyo geeddi-socodkan, waxaad ka samayn kartaa wax-soo-saarka baaskiilka adiga oo gacmihiisa iska leh. Mabaadi'da falka Sida loo yareeyo shaqadaada, si sahlan loo fahmo. Mabda'a hammiga guriga loogu talagalay baradho waa mid sahlan.
Sida loo xoqdo cawska gacanta
Waxaa jira xaalado dhowr ah oo tufid ah xagaaga xagaaga ama goobaha waddanka ay si fudud ugu soo geli karaan: roobabku way dhaafsadeen, cawska ayaa si wayn u koray; waxaa jira caws aad u badan oo loo yaqaan "trimmer" iyo "caws-doorkii"; waxaad u baahan tahay inaad cawska ku xaaqdid meel aan raaxo lahayn oo ah qashinka cawska (carrada aan cidhiidhi ahayn, geedo ama geedo ku dhow).
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Farsamada 2019